पुरातन समयका मानिसहरूलाई रात आफ्ना प्रश्नहरूको जवाफ सपना मा फेला पार्न प्रयास, सपना को व्याख्या गर्न विशेष महत्व संलग्न गर्नुहोस्। त्यहाँ विशेष भविष्यसूचक दृष्टि induce डिजाइन पुरा जादू संस्कार थिए। वर्ष बित्यो, र आधिकारिक विज्ञान सपना बारेमा थप सिके। पूजाहारीहरूको बरु, व्याख्याकारों, हामी अब एक कम गर्न हामीलाई सपनामा देखेको अक्षरहरू र घटनाहरु, बुझ्न मदत गर्न जाँदैछन्। त्यहाँ मनोविज्ञान को यस विशेष क्षेत्रमा संलग्न सम्पूर्ण विद्यालय छन्। यो हाम्रो अवचेतन गर्न गुप्तिकरण गरिएको छ कि सन्देश हो - धेरै विशेषज्ञहरु सपना कि राय को हुन् आधुनिक विज्ञान, व्याख्या को अभ्यास अस्वीकार गर्दैन। यस्तो दृष्टि हामीलाई निर्णय गर्न मदत गर्न सक्छ, र हाम्रो लुकेको आवश्यकता र अवसर सिक्न, र पनि, एक अर्थमा, भविष्यमा भविष्यवाणी गर्न। तथापि, तपाईं आफ्नै को सपना कसरी व्याख्या गर्न सिक्न सक्छन्।
अर्डर आफ्नो प्रश्नहरूको जवाफ प्राप्त गर्न, यो धेरै घटक पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ: निद्रामा आफ्नो लिपि को भावनात्मक घटक र सबैभन्दा महत्वपूर्ण - को प्रतीक को अर्थ। उदाहरणका लागि, तपाईं पुतली सपना के जान्न चाहनुहुन्छ? हामी प्रश्नको जवाफ, र के यसलाई हामी एसोसिएट छ?
पुतली - यो सौन्दर्य र कोमल, प्रकाश र सजिलो, शान र स्नेह, प्रेम र आनन्द हो। विशेष सबैभन्दा संस्कृति, र हाम्रो मा, सकारात्मक प्रतीक हो। एक जवान महिला जीवनको लागि राम्रो र चिरस्थायी संघ संग पहनाया छ जो जसको अर्थ खुसी प्रेम पुतली, को सपना भने। पनि हरियो lawns र फूल बीच खिलवाड, समृद्धि अर्थ, मेरो निद्रामा पुतलीहरु।
केही सपना पुस्तकहरू तपाईं देखेको छैन मित्र को नयाँ अधिग्रहण रूपमा यो व्याख्या, साथै एक पत्र वा अन्य समाचार देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं एक घमाइलो दिन सपना भने, यो दृष्टि तिनीहरूले पुरानो दिनमा, यो जीवन gratifying छ भन्न रूपमा, आनन्द छ वा।
Motley पुतलीहरु - यो सौन्दर्य र प्रेम फूल मात्र होइन प्रतीक हो। तिनीहरूले अक्सर अर्को आँधी हामीलाई सम्बद्ध। एक प्रश्नको जवाफ दिँदै, को पुतली के सपना, हामी खातामा यो समय लिनुपर्छ। त्यसैले, केही downers कि माछा तर्क गर्ने मा पुतलीहरु को सपना को लन मा - यो समय को बर्बादी प्रभावित खाली गर्न छ।
त्यहाँ अन्य व्याख्याहरु छन्। उदाहरणका लागि, एक पुतली जीवनको उड्दै, र कुनै पनि दायित्व बाँधिएका गर्न इरादा छैन, मतलब आँधी, वैकल्पिक मानव सक्नुहुन्छ। वर्ण यो esoteric मा, त्यहाँ अन्य मान छन्। उदाहरणका लागि, के पुतली Dreaming आफ्नो सञ्झ्यालमा उड गर्न खोज्छ कि? यो नयाँ कुरा को सीमा मा छन् भन्ने हो, त्यहाँ आफ्नो जीवन घचघच्याउनुहुन्छ कुरा छ। र यो त्यागेर हुँदैन के हुन बाट, केही राम्रो छ, र यो दिनु राम्रो छ। वास्तविक संसारमा नयाँ मित्र टाढा, बारी छैन अनियमित कुराकानीबाट नहट्न छैन मा - तिनीहरूले आफ्नो जीवन केही नयाँ मा, ल्याउन सक्छ लामो आफ्नो चेतना, या बस अबोध्य लुकेका बाँकी छ भन्ने कुरा आफ्नो आँखा खोल्नुहोस्। तथापि, तपाईं के पुतली सपना जान्न चाहन्छु भने, कि व्याख्या मात्र यी सीमित छैन। सेतो पुतलीहरु सामान्यतया नकारात्मक हामीलाई द्वारा (पाठ्यक्रम, वास्तवमा, यो फल प्रभावित किरा छ किनभने) कथित छन्। तसर्थ, सपना फरक तिनीहरूलाई व्याख्या छन्। उदाहरणका लागि, सपनामा सेतो पुतलीहरु रोग हेराल्ड सक्छ। यो प्रतीक अन्य व्याख्याहरु छन्। का एक महिला कोठा प्रवेश गरेको सेतो पुतली को सपना भन्न गरौं। यो कि उनको इच्छा छैन साँचो आउनेछ हो। वर्ण र लिपि (ती कार्यहरू तपाईं सपनामा प्रदर्शन कि यानी) बाहेक पनि महत्त्वपूर्ण र भावनात्मक घटक छ। उदाहरणका लागि, के तपाईं चिन्तित बनाउँछ पुतलीहरु सुत्न भने, तपाईं बस महसुस हुन सक्छ दोषी को एक अर्थमा मेरो प्रेमी अगाडि।
Psychoanalysts पनि पुतलीहरु संग सपना मा एक राय छ। तिनीहरूले यस्तै सामग्री संग सपना व्याख्या तीन तरिकामा सुझाव। यो स्वतन्त्रता र बेवस्ताई एक चिन्ह हो - त्यसैले तिनीहरू त्यहाँ एक पुतली हो भने भन्ने विश्वास गर्छन्। मनोवैज्ञानिक अनुसार, सपनामा पुतली - यो एक निश्चित कार्य वा केही वा कतै को औचित्य प्रदर्शन गर्न नसक्नुको प्रतिबिम्ब एक प्रकारको छ। र अझै सपना अर्को embodiment: पुतली - अमरता र liberated प्राण को एक चिन्ह।
सपना व्याख्या: सुन - सपना को मूल्य
उँट: सपना मिलर, इस्लामी सपना व्याख्या। किन उँट को सपना?
मासु goulash कसरी खाना पकाउनु? धेरै स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु
खुरमा शेरोन: उपयोगी गुण र contraindications
स्टाइलिश हेर्न डेनिम स्कर्ट के लगाउन?
परिवार युवा आँखाहरु
गाँजा हानि: र यो साबित भएको छ